I-New Dolce Ingrosso Alimentari - Messina
Yonke imikhiqizo oyidingayo ngebhizinisi lakho!
4.1 /5 amavoti (amavoti angama-9)
I-New Dolce Ingrosso ngo-Orso Corbino Pal. I-SITAT a Messina uthengiselaIsitolo esithe xaxa imikhiqizo ye khekhe, Isidlo e bar. Ukudla, imihlobiso nezinto zokwakha ezahlukahlukene: ungcolile ongakukhetha.
I-Dolce Ingrosso entsha eMessina - Ukukhetha okubanzi kwemikhiqizo
I-New Dolce Ingrosso uphawu lomhlaba a Messina ngemisebenzi. Thenga atIsitolo esithe xaxa kubiza okuncane futhi labo okumele benze ama-oda amakhulu bayazi kahle. Noma iyiphi insizakalo oyinikelayo, I-Gelateria, khekhe, Isidlo o bar, TheIsitolo esithe xaxa nokho yisixazululo esihle kakhulu sokuthenga kwakho a Messina. Nakhu ozokuthola I-New Dolce Ingrosso:
I-Gelateria: ama-ayisikhilimu ayisikhilimu, izisekelo, ama-waffles
Isidlo: uginindela ugologo, amakhowe, ilayisi, ufulawa, izinongo
I-Rotisserie: uginiga wamatamatisi, isoso, imayonesi, amakhowe, ubuciko
khekhe: okhilimu, ushokoledi, i-nutella, izinkundla zokudla, i-cannoli engenalutho, izisekelo zezingane khekhe, hlanganisa ikhekhe lesiponji, izithelo ezinophisi, ama-alimondi anoshukela, imajarini
Imihlobiso: ushokoledi, isinamathisela ushukela, imihlobiso ebusisiwe, imihlobiso ye I-Gelateria
Ipulasitiki: Izibuko, u-ayisikhilimu, amathokheni, izinkomishi, i-tray
Amabhokisi wekhadibhodi: amathreyi, amabhokisi e-pizza, ama-disc wekhadibhodi, ama-roll, ama-napkins.
I-Dolce Ingrosso entsha eMessina - Ukudla
I-New Dolce Ingrosso in nge-Orso Corbino Pal. I-SITAT a Messina indawo ongabeka kuyo yonke izithako oyidingayo khekhe, Isidlo e bar. Ingabe unayo khekhe, indawo yokudlela, i-pizzeria, a bar noma ingabe uhlinzeka ngezinsizakalo zokudla? Imikhiqizo ye I-New Dolce Ingrosso a Messina bakulungele ukuthi ulungiselele izitsha zangempela zamakhasimende. Izithako zalokhuIsitolo esithe xaxa ngayinye khekhe, Isidlo e bar ngamafuphi, bayisiqinisekiso sokwethenjwa ekuhlinzekweni kokudla.
I-New Sweet Wholesale eMessina - Imihlobiso
Ngisho neso lifuna ingxenye yalo. Lapha ngoba I-New Dolce Ingrosso ithengisa ngaphezu kwezithako ezidingekayo khekhe, Isidlo e bar, kanye nemihlobiso ye khekhe nesitolo se-ayisikhilimu. Ukuhlinzeka ngookhilimu abakha imizwa etafuleni, ukucebisa inkomishi noma ukwenza udishi ongalibaleki, imihlobiso I-New Dolce Ingrosso a Messina Yimi engangikufuna. Noma ngubani oku-oda okuthile okwakho khekhe o Isitolo se-ayisikhilimu ngokuqinisekile sizokhumbula isipiliyoni esihle futhi ngokuqinisekile sizobuya! Kwenze kwehluke khekhe noma isitolo se-ayisikhilimu lapho usebenza khona ngokubonga I-New Dolce Ingrosso. Ngaphezu kwalokho, ngoba Ukuhlobisa amaphathi neminye imikhiqizo eminingi ye-khekhe, i-Catering nama-Bar ungaxhumana nawo Imihlobiso yezindatshana Cake Design Tiziana Arena eMessina.
Ukudla kanye nezinto ezintsha zeDolce Ingrosso eMessina - Izinto zepulasitiki nekhadibhodi
Zonke 'Isitolo esithengisa izinto ezintsha Esitolo Esisha ngo-Orso Corbino Pal. I-SITAT a Messina akukho ukuntuleka kwezibuko, amathayela e-ayisikhilimu, izinkabi, izinkomishi namathileyi epulasitiki khekhe, Isidlo e bar. Futhi, maqondana nephepha: i-tray, amabhokisi e-pizza, amadiski amakhadibhodi, imiqulu kanye nama-napkins khekhe, Isidlo, ama-pizzerias, i-catering kanye bar. Yonke imikhiqizo yepulasitiki neyamaphepha ebalulekile ebhizinisini oliphathayo ngokuqinisekile iyatholakala kusuka I-New Dolce Ingrosso. Khetha a Isitolo esithe xaxa egcinwe kahle ukuze athengiswe phezulu: iya ku I-New Dolce Ingrosso.
Ikheli: ngo-Orso Corbino Pal. USitat
Ucingo: 090 2923937
Yefeksi: 090 2939798
Email: newodolce Christi@hotmail.it
Facebook: Ngingeze koxhumana nabo
Inombolo ye-VAT: 03123300836